Iwo +10 sonnets dzakakurumbira naFrancisco de Quevedo | Zvazvino Zvinyorwa
¿Aya ndiwo mazita gumi anozivikanwa rakanyorwa naFrancisco Gómez naQuevedo naVillegas? Zvakanaka, zvirokwazvo hongu. Uye nhasi chi gore rekufa idzva yemunyori wepasi rose, akafira munyika yangu, mu Villanueva de los Infantes muna 1645. Mumazuva mashoma ake kuberekwa, saka mundangariro yake, ndinovarangarira. Zvimwe takaaverenga kane chiuru. Musiyano upi zvaunoita. Inogara iri mufaro. Uye avo vasina kuita izvozvi vava nemukana.
1 Hunhu hwemasonets aQuevedo
1.2 Kudzika ... uye kunzwisisa
2 Iwo madingindira makuru emambure aQuevedo
3 Sonnets anozivikanwa kwazvo eQuevedo nezverufu, hupenyu uye rudo
3.2 Kuregeredza kunakidzwa kwekurarama kune uyo rufu rwunouya risingafungidzike
3.3 Dzokorora hushoma hwehupenyu uye unongedze hunyengeri hwayo uye vavengi vayo
3.5 Rudo nerufu
3.6 Rumbidzai pamariro kuna Don Melchor de Bracamonte (mwanakomana wekuverenga kwa Peñaranda)
3.7 Inodzidzisa kuti zvinhu zvese zvinonyevera sei nezverufu
3.8 Kuna Luis de Góngora
3.10 Nguva dzose rudo kupfuura kufa
3.11 Kutsanangura rudo
3.12 Kuodzwa mwoyo kwevakadzi
Hunhu hwemasonets aQuevedo
La basa rekunyora raFrancisco de Quevedo Izvo, pasina kupokana, ndeimwe yeakakura akachengetedzwa nanyanduri. Pamusoro pezvo, haana kutarisa parudzi rumwe chete, asi akabata nhetembo uye nhetembo zvakare. Uye mukati medetembo unowana zvese nhetembo nemamoneti (anozivikanwa nekuve nemakumi mana nemana mahendecasyllable mavhesi ane makonzonesi), pamwezve nhetembo refu kana pfupi.
Nekudaro, kune mamwe makiyi anomira kunze kwebasa raQuevedo, kunyanya nhetembo yake, uye kunyanya neti dzake, dzakadai se:
Uye ndeyekuti Quevedo yaive ne chipo chekunyora nemutauro kuti vanyori vashoma vakabudirira. Nekuda kweichi chirevo chakapfuma, akakwanisa kuwana mazwi akakodzera mune zvese zvakauya kwaari, izvo zvinoreva kugona uye nyore kunyora chero chaaida.
Muchokwadi, zvinozivikanwa kuti Quevedo akanyora nhetembo zhinji, uye dzese dzine madingindira akasiyana siyana: rudo, hupenyu, kuseka, kuseka ...
Kudzika ... uye kunzwisisa
Kumwe kwekukundikana kwevanyanduri vazhinji ndekwekuti nhetembo dzavo hadzinzwisisike. Kana iwe unovapa zvinoreva izvo zvisiri izvo chaizvo izvo zvaidiwa nemunyori (kana izvo zvakapihwa nenyanzvi). Muchiitiko cheQuevedo, zvese nemanyoni uye nhetembo, ivo dzimwe nguva yakadzika uye yakakomba zvekuti zvakaoma kuzvinzwisisa zana muzana.
Iwo madingindira makuru emambure aQuevedo
Kunyangwe akanyora pamusoro pezvidzidzo zvakawanda, chokwadi ndechekuti pane zvimwe zvinoonekera, senge hunhu (maererano nerombo, simba ...); rudo; hupenyu; rufu…
Sonnets anozivikanwa kwazvo eQuevedo nezverufu, hupenyu uye rudo
Tisati tapedza, hatidi kubva tisina kukusiya Sonnets dzinozivikanwa dzeQuevedo, mimwe misoro yakanangana: kufa, rudo uye hupenyu.
Mwenje inoyera, zuva raAugust
kuti meso ako asvinure pasi,
nepfungwa yekuti denga rinofamba
mumweya wangu vanotsanangura kuwirirana.
Melody haapindirani nepfungwa
zvisingaoneki pachifukidzo chepasi,
zvimwe zveiyo canoro ardor uye yakakwirira nyaradzo
zvikamu zvinopinda mualma mía.
Iwo ma mobles ekutanga ndiwo matunhu ako,
iyo yavanobvutira muruzhowa runopfuta rwegoridhe
masimba angu akapinza uye akareruka.
Ini ndinogona kurasikirwa nehupenyu hwangu, kwete kushongedzwa
Zvakanaka, zvechitendero, ndinorumbidza zvandinoyemura.
Mifananidzo isiri-yakashata yeLysis
Frizzy, tambo dzisina mutemo dzakasununguka,
kuti kwenguva Midas aive mumaoko ake;
muchando nyeredzi nyeredzi pamoto,
uye nerunyararo akamuchengeta murugare.
Roses kusvika Kubvumbi naMay zvisati zvaitika,
kubva pakutukwa kwenguva yakadzivirirwa;
auroras mambakwedza kuseka,
makaro kupora kwakaponesa.
Kurarama mapuraneti edenga hupenyu,
uyo anofanirwa kuve mambo Lisi anoshuvira,
yerusununguko, iyo inosunga mwenje yayo.
Sphere iri zvine musoro inoratidzira pasi,
uko rudo runotonga, kuti anotarisa zvakadii,
uye kunogara Rudo, anouraya zvakadii.
"Ah wehupenyu!" ... Hapana anondipindura here?
Pano pazera ramakore randakararama!
Fortune nguva dzangu dzakaruma;
Maawa ekupenga kwangu anovanda.
Izvo usingakwanise kuziva kuti sei kana kupi,
hutano nezera zvatiza!
Hupenyu hwashaikwa, izvo zvanga zvichirarama zvinobatsira,
uye hapana dambudziko risingakomberi.
Nezuro kwasara; mangwana haasati asvika;
nhasi pfungwa iri kuenda isina kumira;
Ndiri a, uye ndichava, uye a aneta.
Muzuva ranhasi uye mangwana nezuro, pamwe chete
manapukeni uye machira, uye ndanga ndiri
parizvino imba yemufi.
Kuregeredza kunakidzwa kwekurarama kune uyo rufu rwunouya risingafungidzike
Kurarama kufamba zuva pfupi,
uye kurarama kufa kuri, Lico, hupenyu hwedu,
nezuro kumuviri usina kusimba wakayedza,
nguva dzese mumuviri dzakavigwa.
Hapana icho, kuve, chiri chidiki, uye chichava chinhu
munguva pfupi, uyo anoda chinzvimbo anokanganwa;
Zvakanaka, zvezvisina maturo kunyengetedzwa,
inoshuvira kwenguva, nyika ine hupenyu.
Kutakurwa nekufunga kwekunyepedzera
neyekuseka nekusaona tariro,
iwe uchagumburwa pachivako chimwe chete.
Kufanana neuyo anoseka, gungwa rinofamba,
uye, pasina kufamba, nhunzi nemhepo,
uye usati wafunga zvekusvika, zvinosvika.
Dzokorora hushoma hwehupenyu uye unongedze hunyengeri hwayo uye vavengi vayo
Chii chimwe chiri chokwadi asi hurombo
muhupenyu husina kusimba uye hwakareruka?
Kurwisa kuviri kwehupenyu hwevanhu,
kubva pakuberekwa ivo kukudzwa nehupfumi.
Nguva, isingadzoke kana kugumburwa,
mumaawa ekutiza anomumutsa;
nekushuva zvisirizvo, gara uchidzvinyirira,
mhanza inopera kushaya simba kwake.
Rarama runyararo uye runonakidza kufa
hupenyu pachahwo; hutano ihondo
zvechikafu chavo chavakarwa.
Oo zvakadii munhu asingazivi atadza,
kuti pasi pano rinotya kuti hupenyu hunowa,
uye haaone kuti mukurarama akawira pasi!
Kudzivirira kwehupenyu nerufu
Kana ini ndisingatyi kurasikirwa nezvandinazvo,
uye handidi kuva nezvandisingafarire,
zvishoma zvehupfumi mukati mangu kuparadzwa
Izvo zvichave zvakakosha, iwe paunondisarudza ini mutambi kana musungwa.
Mhuri yake yatoshandura chishuwo;
kwete kuchena kutya, kana kuseka kusvika mufaro
Ane chikwereti chikamu chekupedzisira chezera rangu kwaari,
kana kushuvira iyo Grim Reaper kutenderera kwake.
Chete kusada ndiko kwandinoda;
nguvo dzemweya zvipfeko zvangu;
tora post kufa, nemari.
Ini ndinotarisa kuvimbiso senge tsori;
kufa sezvandinokwegura ndinovimba:
Zvakanaka vandivigira, nditorere mazuva acho.
Mr. don Juan, nefivha zvisingaite
ropa rakapera rinopisa,
uye nekuda kwezera risingadzivirirwe,
kubvunda, kusapomba, pakati petsinga netsinga:
Zvakanaka, iyo misoro izere nechando,
muromo, wemakore wakapambwa,
kuona, kurwara, muhusiku hwakavigwa,
uye masimba, ekushandisa kwevamwe.
buda undotora sepoltura,
bata guva uye chiyeuchidzo:
kuti kufa ndiri mupenyu pfungwa dzakaperera.
Rufu rwakawanda ndinonzwa
zvinoitika mukufara uye kupenga,
uye kuvadiki manzwiro acho anoponeswa.
Vhara maziso angu ekupedzisira
mumvuri uyo zuva jena richanditora,
uye ndinogona kusunungura mweya wangu uyu
awa yekuda kwake kwekubata kumeso
asi kwete, kumwe kunhu, pamahombekombe,
ichasiya ndangariro, kwayakapisa;
kushambira kunoziva murazvo wangu mvura inotonhorera,
Uye kurasikirwa nekuremekedza mutemo wakakomba.
Mweya wave uri mwari wejeri,
mitsetse inosekesa kune yakawanda moto yakapa,
marble akapisa zvine mbiri,
muviri wako uchasiya, kwete hanya yako;
vachava madota, asi vachafunga;
Vachave guruva, guruva rakawanda murudo.
Rumbidzai pamariro kuna Don Melchor de Bracamonte (mwanakomana wekuverenga kwa Peñaranda)
Nguva dzose, Melchior, aikomborerwa
Hupenyu hwako mukutenderera kwakawanda pasi;
Uye zvakakomborerwa kare Kudenga,
Iko kwaigona kupihwa chete.
Pasina iwe hondo yakanga isina zvombo
Uye kukodzera kushungurudzwa pasina nyaradzo;
Kukudzwa uye Kushinga mukuchema nekuchema
Uye kugutsikana kwakazvidzwa zvisina kunaka.
Zvakawanda sei zvavasina kukupa mubairo, iwe wakakodzera,
Uye mubairo mukushinga kwako wakadhonza,
Uye kumukunda pane zvawaive nazvo.
Chinzvimbo icho munyika chausina kusvika
Ndiye anonyepa, nherera neakasuruvara,
Kuti iwe wakazvishongedza iwe nekorona nekuzvidza kwake.
Guva remutongi akanaka Berenguel de Aois
Kana kuberekwa, uye pasina guva rinoratidzika,
kwete kundinyorera pano nhema,
Guest, yambira kuti muguva makazvarwa
uyo anoda Berenguel kurarama anofa.
Ani naani anopfeka Toga yaaipfeka,
uye asingamutevedzeri pane zvaanotonga nezvaanoita,
nemuenzaniso mutsvene uyu uri kutyisidzirwa
ani naani anotevera jasi rake rehondo, mira.
Akaenda asina kunyunyuta uye nemari;
kanzuru yakamuviga; akavigwa,
mariri akachengeta zano rakaomarara.
Akavaka hupenyu hwakafukidzwa.
Haana kuvaka kuti ararame mukubudirira,
kwaari hakuna akachema, nanhasi arikuchemerwa.
Inodzidzisa kuti zvinhu zvese zvinonyevera sei nezverufu
Ndakatarisa kumadziro enyika yangu,
kana nguva yakasimba, yatopunzika,
kubva kurudzi rwezera rakaneta,
uyo ushingi hwake hunopera.
Ndakabuda ndokuenda kumunda, ndakaona kuti zuva rakanga richinwa
hova dzechando dzakabuditsa;
uye kubva kumakomo ane makomo mombe,
iyo nemimvuri yakabira mwenje kubva pazuva racho.
Ndakapinda mumba mangu: I saw that it was stained
yekamuri rekare raive zvakapambwa;
mudonzvo wangu wakakombama, uye wakasimba.
Kukundwa nezera ndakanzwa munondo wangu,
uye handina chandakawana chekuisa maziso angu
kuti kwaive kusiri kuyeuka kwerufu.
Kuna Luis de Góngora
Ini ndichaparadzira mabasa angu nebhekoni
sei usingandirume, Gongorilla,
imbwa yemagayo eCastile,
nyanzvi mukushora, semukomana munzira
kwete murume, mupristi wechiIndia,
kuti iwe wakadzidza pasina cristus the primer;
chocarrero kubva kuCórdoba uye Seville,
uye mudare jester kune vamwari.
Nei uchitsoropodza mutauro wechiGiriki
kungova rabhi wechiJuda,
chinhu icho mhuno yako ichiri kuramba?
Usanyora mamwe mavhesi, ehupenyu hwangu;
kunyangwe vanyori vakanamatira kwauri,
yekuve nekumukira seanouraya.
Pane imwe nguva pamurume akabata mhino,
pane imwe nguva paive nemhino yepamusoro,
Pane imwe nguva pane imwe nguva yakareva mhino uye nyora,
Pane imwe nguva pane yakanyatsoveurwa ndebvu.
Pane imwe nguva pakatarisana nezuva rakashata,
kamwe pamusoro pearitari inofungisisa,
pane imwe nguva pane nzou yakatarisana,
Ovidio Nasón akanyanya kutaurwa.
Pane imwe nguva pakaitika chikepe,
kamwe pane piramidhi muEgipita,
madzinza gumi nemaviri emhino aive.
Pane imwe nguva pamhino isingagumi,
mhino zhinji, mhuno inotyisa,
kuti pamberi paAnasi yaive mhosva.
Nguva dzose rudo kupfuura kufa
mumvuri, kuti ndichabvisa zuva jena,
awa, kuchido chake chekushushikana kwekuchiva;
asi kwete kubva pano pamahombekombe
ichasiya ndangariro kwayakatsva;
Uye kurasikirwa nekuremekedza mutemo wakakomba;
Mweya kwaari Mwari anga ari mutorongo.
vanosiya muviri wako, kwete hanya yako;
Vachave madota, asi zvichave zvine musoro.
Vachave guruva, guruva rerudo rakawanda.
Riri kupisa aizi, moto wakaoma
inokuvara, inorwadza uye haina kunzwa,
chinhu chakanaka chakarotwa, chipo chakaipa,
inguva pfupi inonetesa.
Iko kutarisira, kunotipa tarisiro,
gwara, rine zita rakashinga,
kufamba kwakasurukirwa pakati pavanhu.
rudo chete kudiwa.
izvo zvinogara kusvika paroxysm yekupedzisira,
chirwere chinokura kana chikarapwa.
Uyu ndiye mwana weRudo, ino ndiyo gomba rako rakadzika.
tarisa hushamwari hupi hwaachave nahwo pasina,
iye anopesana naye pachinhu chose.
Kuodzwa mwoyo kwevakadzi
Puto ndiye murume anovimba nemahure,
uye kusvira iyo iyo yaunofarira inoda;
fucking ndiyo stipend inopihwa
mukubhadhara yako fucking kambani.
Fucking iko kuravira, uye kuseka mufaro
kuti iyo putaril nguva inotiita isu inodhura;
uye ini ndichataura kuti irikutamba uyo zvinoita
kuti hausi hure, mukadzi wangu.
Asi ndidaidzire kuti ndinotamba murudo
kana mushure mehure handikusiye;
uye sei fucking kufa ini ndakapisa
kana ndichibva kune mamwe mahure akadaro ndichabhadhara,
nekuti mahure akakomba anodhura,
uye yakaipa, inokatyamadza sluts.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Iwo +10 sonnets dzakakurumbira naFrancisco de Quevedo
Ini ndinofunga kuti Quevedo irinani kupfuura Cervantes naShakespeare… nekuti Quevedo inoongorora nekufarira madingindira anogona kunyatsoshandiswa kune nyika yanhasi uye 'dambudziko redu revanhu' zvakawandisa; anogara aripo iye zvino. Uye ini handisi mutsoropodzi kana munyori.
Simon Scarrow: "Vanyori vazhinji vachatambura mumakore mashoma anotevera."